२१ दिनमा डा. गोविन्द केसीले जिते को’रोना::Point Nepal
काठमाडौं : प्रा.डा. गोविन्द केसी २१ दिनपछि को’रोना भा´इरस (कोभिड-१९) सं`क्रमण मुक्त भएका छन् । को’रोना सं´क्रमण पुष्टि भएपछि कात्तिक २८ गते त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएका केसी बिहीबार साँझ डिस्चार्ज भएका हुन् ।
को’रोनासँग मिल्दो लक्षण देखिएपछि कात्तिक २७ गते स्वाब परीक्षणका लागि दिएका केसीको रिपोर्ट कात्तिक २८ गते पोजिटिभ आएको थियो। सं´क्रमण पुष्टि भए लगत्तै अस्पताल भर्ना भएका केसी आज डिस्चार्ज भएका हुन् । उनका सहयोगी प्रितम सुवेदीका अनु सार डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ ।
डा केसीलाई कात्तिक २८ गते को’रोना सं´क्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। रु´घाखोकी र ज्व´रोको लक्षण देखिएपछि केसीको को’रोना परीक्षण गरिएको थियो। को’रोना सं´क्रमण पुष्टि भएको २१ औं दिनमा डा केसीको स्वा´ब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको डा केसी का सहयोगी प्रितम सुवेदीले जानकारी दिएका हुन्।